Ihe Omuma & Obu |
Anlọ Akwụkwọ Jinan Licheng Wanxiang Xintian
Emere ka igwe ihe osise nke LONBEST LCDBy n’ụlọ nyocha nke ụlọ ọgwụ na ihe ọmụmụ physics nke Jinan Licheng Wanxiang Xintian School. Dịka akụkụ pụrụ iche nke bọọdụ anyị nke LCD, ikuku anaghị adịzi agbanwe agbanwe na arịrịọ nke ụlọ nyocha na-enweghị ntụ ma na-eme ka ụlọ ahụ dị ọcha karịa ka ọ dị na mbụ.
Onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ na-ekwu okwu ọma maka LONBEST LCD Blackboard. O kwenyere na ahụike nke ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ na-ekwe nkwa site na ịzere mmetọ ájá sitere na chalks. Ọ dabara adaba na ihichapụ ederede ederede na bọọdụ ahụ site na ịpị otu bọtịnụ. Ha agaghị enwe nsogbu site na ájá ma na-ehichapụ bọọdụ.
Jinan Changqing University-Mgbakwunye Junior High School
Nke a bụ klas nke Jinan Changqing University nke jikọtara Junior High School. Onye nkuzi mgbakọ na mwepụ na-ede ihe na LONBEST LCD na bọọdụ. Ogwe mmekọrịta ahụ dị n'etiti jikọtara na bọọdụ. Já-free na otu isi ichicha ọrụ na-eme ka o kwe omume izere uzuzu mmetọ. A na-ekwe nkwa ile anya ụmụ akwụkwọ n’ihi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke na njirimara na-abụghị radieshon. Studentsmụ akwụkwọ nọ n'azụ ụlọ akwụkwọ nwekwara ike ịhụ ederede ederede n'ụzọ doro anya.
Nzaghachi sitere n’aka onye nkuzi: Ndị nkuzi nọ n’ụlọ akwụkwọ ahụ na-egosi na ndị nkuzi na-enwe ụkwara ugboro ugboro n'ihi uzuzu kpatara mgbe ha na-ede ma na-ehichapụ. Thejá na-enyekwa ụmụ akwụkwọ nsogbu, ọkachasị ndị nọ n’ihu, nke na-enye ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ nsogbu n’ezie. AKWBKWỌ LCD kacha mma na-eme ka gburugburu ebe obibi dị ọcha na uzuzu. Ọzọkwa, a pụrụ igosi ngwụcha ọrịa strok niile dị ka nke calligraphy.
Amalọ Akwụkwọ International Panama
LONBEST LCD Blackboard na-anọchi bọọdụ bọọdụ na bọọdụ ọdịnala, na-enye gburugburu ebe obibi nkuzi dị ọcha ma dị mma maka Panama International School ma na-enyere ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ aka imeziwanye nkuzi ha.
Já-free na otu isi ichicha ọrụ na-eme ka o kwe omume izere uzuzu mmetọ. A na-ekwe nkwa ile anya ụmụ akwụkwọ n’ihi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke na njirimara na-abụghị radieshon. Studentsmụ akwụkwọ nọ n'azụ ụlọ akwụkwọ nwekwara ike ịhụ ederede ederede n'ụzọ doro anya.
Arylọ akwụkwọ praịmarị Tai'an Zhiyuan
Nke a bụ klaasị ndị China nke Tai'an Zhiyuan Primary School. Onye nkuzi edeela nchịkọta nke ederede na bọọdụ bọọdụ LONBEST LCD iji mee ka ụmụ akwụkwọ gụgharịa akụkọ ahụ dabere na hints na bọọdụ ahụ. Echiche dị iche iche nke mbara igwe na-eme ka o kwe ụmụ akwụkwọ nọ n'azụ anya ịhụ aka aka nke ọma. Ihe ọzọ bụ, agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ike ịdọrọ uche ụmụ akwụkwọ ma chebekwa ịhụ ụzọ.
Nzaghachi sitere n’aka onye nkuzi: Otu n’ime onye nkuzi n’ụlọ akwụkwọ ahụ na-egosipụta na ndị nne na nna nwere afọ ojuju na bọọdụ bọọlụ LONBEST. Aremụaka nwere oke obi ụtọ mgbe ha nwere klaasị ma ha hụrụ scribbling bọọdụ bọọdụ n'oge ezumike, ebe nke a bụ ihe dị ọhụrụ nye ha ma ha niile chọrọ ịnwale. Nke kachasị, ọrụ otu nhichapụ dị mkpa na-emekwa ka arụmọrụ izi ihe dịkwuo mma. Ọrụ ahụ na-edozi nsogbu nke ihichapụ bọọdụ maka ụmụaka dị obere.
Ebe onye njem ibe anyi na Thailand
Nke a bụ ebe a na-egosi ndị mmekọ ibe anyị na Thailand. Ọ weghachiri ezigbo ọnọdụ nke ụlọ ọrụ azụmaahịa. Enwere ike iji LCD ojii na-agbachapụ agbachapụ na ụlọ nzukọ na ihe dịka mmadụ iri. Obere ụlọ ọrụ nwere 4-5 ndị ​​mmadụ nwere ike ịhọrọ kọmiti ederede LCD (52 '' / 66 '' / 60 '').
Enwere ike itinye osisi LCD na-ede akwụkwọ na mgbidi ma ọ bụ tinye ya na nkwado ahụ. Ndị ọrụ agaghị atụ egwu ịtụfu nrịbama ma ọ bụ chalks karịa, ebe ha nwere ike iji mkpịsị aka ma ọ bụ ihe ọ bụla siri ike dee ya. Onweghi ihe ndi choro.
Roomlọ ebe a na-eme ihe nkiri na Shenzhen
Isi ụlọ ọrụ anyị dị na Jinan, anyị guzobekwara alaka na Shenzhen, na-anabata gị ileta anyị.
Klọ akwụkwọ ọta akara Kenya
Blackboard anyị nke LCD dochiri bọọdụ chalk, kpochapu mmerụ ájá kpamkpam, ma kpuchido ahụike nke ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ.